Paris Saint-Germain oo doonaysa inay saddex ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda Real Madrid ku soo qaadato adduun dhan £180m – Gool FM
(Paris) 14 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa la soo warinayaa inay naadiga Real Madrid suuqa kala iibsiga xididgaha ee xagaagan ka soo qaadanayso saddexda ciyaaryahan ee kala ah; Gareth Bale, Isco iyo Toni Kroos.
Bale ayaa la filayaa inuu ka tagi doono garoonka Bernabeu dhammaadka xilli ciyaareedkan 2018-19, iyadoo xitaa uusan qeyb ka ahayn labadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay Los Blancos wajahday kooxaha Villarreal iyo Real Sociedad.
Xiddiga xulka qaranka Wales ayaa la warinayaa in loo sheegay inuusan wax mustaqbal ah ku lahayn kooxda, halka Kroos uu sidoo kale bandhig aan fiicnayn ka sameynayo xilli ciyaareedkan kooxda haysata Champions League, waxaana laga yaabaa inuu raaco Bale oo albaabka loo tilmaamay.
Sida ay warinayso Jariiradda AS, kooxda PSG ayaa doonaysa inay Bale iyo Kroos u soo kaxaysato caasimada Faransiiska xilli ciyaareedka soo socda ee 2019-2020, halka Isco sidoo kale uu bartilmaameed u yahay kooxda oo markale ku soo laabatay tartanka Champions League.
Isco ayaan boos joogto ah haysan tan iyo markii uu Macallin Zinedine Zidane uu dib ugu soo laabtay hoggaanka kooxda Real Madrid, laakiin waxaa jira warar la isla dhexmarayey oo ku aaddan mustaqbalka xiddiga reer Spain oo sheegayey inuu ka tagi doono naadiga.
Warbixinta waxaa kale oo lagu sheegay in kooxda PSG ay saxiixyada saddexdaan ciyaaryahan ku bixin doonto adduun dhan 180 milyan oo gini, sidoo kalena waxa ay doonayaan inay weeraryahanka kooxda Lille ee Nicolas Pepe ay keenaan garoonka Parc des Princes, inkastoo ay sidoo kale xiiseynayso xiddigan kooxda Manchester United.